avylavitra · Jona 2021 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Jona, 2021
Editor/Translator for Lingua Malagasy · Nanomboka nandika tamin'ny 10 Marsa 2008 · 2669 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Jona, 2021
Mediam-bahoaka30 Jona 2021
Ao anatin'ny tanàna kely iray any amin'ny nosy farany avaratra ao Hokkaido, firy ny vintana mety hitontonanao amina Japoney iray miteny espaniôla, miaina sy miasa any amin'ny Repoblika Dominikàna nandritra ny 47 taona, ary ankehitriny manafatra ny voan-kafe tsara indrindra mety ho hitanao any Azia?? Mba hisokafana amin'ny “tsy nampoizina” rehefa...
Sangany amin'ireo media belarosiàna, namafa lahatsoratra an-tambajotra mba hiarovany ny mpiasa
Eoropa Afovoany & Atsinanana30 Jona 2021
Nesorin'ny toniandahatsoratry ny Tut.by daholo ireo votoaty virtoaly navoaka tamin'ny ankamaroan'ireo fantsom-baovaony tety anaty media sôsialy tamin'ny 2020 sy ny tapany voalohany ho an'ny 2021, anatin'ny tena mampafàna ny hetsipanoherana taorian'ny fifidianana.
Nohamafisin'i Hong Kong ny lalàna mifehy ny fiainana manokana hanoherana ny “doxxing”
Azia Atsinanana29 Jona 2021
Raha lany ilay lalàna, moa ve hampihatra tsy misy fiangarana azy io ny Kaomisera mpiaro ny Fiainana Manokana, handray an-tànana ny "doxxing" tsy ijerena izay (tena na heverina ho) fironana politikan'ilay iharany?
Nilaza ilay famoahambaovao nomerika Stand News fa hanàla lahatsoratra fanehoankevitra sy tsanganana navoakany talohan'ny volana May ary hampiato ny fanekena fanomezana mba hampihenana ny mety ho kinanga hanjo azy araka ny lalàna momba ny filaminam-pirenena.
Karaiba22 Jona 2021
Tsy zakan'ireo mponina intsony ny fiantraikan'ny fandotoana rano aterak'ireo fitrandrahana. Ezahan'izy ireo ny manakana famoronana toeram-pitrandrahana vaovao mba hiarovana ny tontolo iainana.
Mediam-bahoaka21 Jona 2021
Eoropa Afovoany & Atsinanana18 Jona 2021
Tsy nahita ny fandefasana nivantana ny webinar tamin'ny 17 Jona nataon'ny Global Voices ary nanasongadinan'i Tanya Lokot ilay bokiny "Beyond the Protest Square" ve? Ireto ny lahatsary sy feo ary e!
Azia Afovoany sy Kaokazy17 Jona 2021
"Tokony ho ampiharin'ny Apple tsy asiana fiangarana sy amin'ireo mpanjifany rehetra ny fepetrany momba ny resaka tsiambaratelo sy ny zon'olombelona – na aiza na aiza firenena misy ireny mpanjifany ireny"
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana13 Jona 2021